Rufanabande - Wikipedia
(Redirected from Mafanabande)
Pachinyorwa chino izwi rokuti rufanabande riri kuturikira chinonzi isotope kuEnglish. Mafanabande inhanngande dzine nhamba yemhodzigetsi yakaenzana asi dzine nhamba yehuremu yakasiyana zvichibva pakusiyana kwenhamba yema neutron. Sokuti carbon-12 neCarbon-14 inhangande dzine mhodzigetsi 6; asi dzinozosiyana pakuti Carbon-14 ine ma neutron 8, Carbon-12 yoita ma neutron 6. Mafanabande anowanikwa mubande rimwechete paPeriodic Table.
Izwi rokuti mafanabande riri kududza kuti nhangande mbiri dziri kurehwa dzinowanikwa mubande rimwe paChapotera cheNhangande. Mafanabande akaenzana panhamba yeAtomu, asi nhamba dzehuremu dzinosiyana. Yureniyamu ine mafanabande anoranzukira, zvimwechete neSizinyamu inodarowo.
Tarisai chinyorwa chinonzi bande remuchero chinopa kunzwisisa zvinoreva bande.
VaKongo vanoti fwanana (to fit, correspond, agree, coincide, match, be similar, to resemble, be equal, accord with) kureva kufanana.
VaDigo vanoti phande (side, direction, piece, portion, direction, a certain part, region, district, part of a town or country).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Rufanabande&oldid=68737"
This page was last edited on 7 Gunyana 2019, at 16:44.